[Iziko Lezorhwebo Lehlabathi laseTshayina CBD] Ukubona umgangatho ophezulu we-Sonya 2BR iflethi okanye indlu ekwicomplex - I-Airbnb
[Iziko Lezorhwebo Lehlabathi laseTshayina CBD] Ukubona umgangatho ophezulu we-Sonya 2BR iflethi okanye indlu ekwicomplex
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJoy
Le flethi okanye indlu ekwicomplex eyi-140 sqm isembindini we-Beijing enabantu abaninzi, ezantsi yipaki yesixeko ye- CBD, enembonakalo ephezulu kakhulu kwaye izele kukubona ubusuku bokushishina obuphithizelayo kumazwe ngamazwe.
Eli ligumbi elikhulu elinamagumbi okulala ayi-2 sqm, amagumbi okulala ayi-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi elinento yonke e-ITC
[Igumbi lokuhlala] Iifestile ezinkulu ezisuka emgangathweni ukuya esilingini, imbonakalo yasebusuku yesibhakabhaka sesixeko se CBD. Ngeprojekta ye-rice flagship N20, iprojekta yenkcazelo ephezulu ye-100-inch, i-Harman Carton audio, yonwabela imidlalo yeqonga yasekhaya egqibeleleyo ukuzisa isidlo esivakalayo;
Le bhari inomatshini wokugrilla ozenzekelayo oneembotyi zekofu zaseEthiopia, ohamba nezimuncumuncu onokukhetha kuzo ukuze wonwabele iti yasemva kwemini kunye nentsapho yakho nabahlobo.
[Igumbi lokulala eliphambili · Sui Ya Bai] Iifestile ezinkulu eziqala phezulu ziyokutsho ezantsi ezijonge indawo yorhwebo yamazwe ngamazwe ngaphandle kwefestile, ibhedi enkulu etofotofo eyi-2M * 1.8m; umatrasi okwizinga leenkwenkwezi.
[Igumbi lokuhlambela eliphambili] Ibhafu + Ishawa enomatshini wokomisa iinwele, isepha yezandla yaseNew Zealand, ioyile yehashe yaseJapan, itawuli enkulu yokuhlamba, itawuli encinci yezandla, ikepsi yeshawa, ikepsi yeshawa, umxube kunye nebrashi yokuxubha amazinyo ukuze iindwendwe zihlale kamnandi.
Igumbi lokulala【 leendwendwe · Iifestile 】 ezisemgangathweni ezimhlophe eziqala phezulu ziyokutsho kwisilingi, i-2M * 1.4M + 2M * 1.2M ububanzi nezitofotofo iibhedi ezilala umntu omnye ezisongwayo; oomatrasi abakwizinga leenkwenkwezi ukuze bonwabele ubusuku obuphithizelayo be CBD ebusuku.
[Igumbi lokuhlambela leendwendwe] Igumbi leshawa elinomatshini wokomisa iinwele, isepha yezandla yaseNew Zealand, ioyile yehashe yaseJapan hlamba izinto ezintathu, itawuli enkulu yokuhlamba, itawuli encinci yezandla, ikepsi yeshawa, ikepsi yeshawa, umxube nebrashi ethambileyo yokuhlamba ukuze ube nexesha elimnandi lokuhlamba.
[Ikhitshi] Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, ioveni, izixhobo zasekhitshini, izinto zetafile, iiglasi zewayini
[Indawo yokuhlamba impahla] Umatshini wokuhlamba impahla ozenzekelayo, isepha
Indlu ibekwe kwindawo engundoqo yeChina World Trade Centre.Ubomi kunye nezothutho zilula kakhulu.Lolona khetho lubalaseleyo lokuhamba, iindibano ezincinci okanye uhambo lweshishini.
Wamkelekile ukuba udibane nam